BOOLIISKA SWEDEN OO U DHOW INUU AQOONSADO QOFKII DILAY ANNA LINDH
Ibraahim Saalax | SomaliTalk Denmark
Booliiska dalka Sweden ayaa lagu soo waramayaa inay natiijo fiican ka gaari rabaan wararka la xiriira ninkii lagu tuhmayay inuu dilay haweenaydii ahayd wasiirka arrimaha dibadda Sweden Anna Lindh.
Anna Lindh ayaa geeriyootay, kadib markii uu nin da’diisa lagu qiyaasay 30 jir uu dhowr jeer mindi uu watay geliyay meelo ka mid ah jirkeeda, dhaawacaasoo sababay inay u geeriyooto subaxnimadii khamiistii ina dhaaftay, kadib markii guul laga gaari waayay qaliinkii qaatay saacado badan.
sawirka ninka lagu tuhmayo inuu dilay Anna Lindh
Wargayska caanka ka ah dalka Sweden ee la yiraahdo Expressen ayaa maanta soo bandhigay sawir aan si fiican u muuqanin laguna sheegay inuu ahaa ninkii dilay Anna Lindh, wuxuuna wargayska intaas ku daray in sawirkaas laga qaaday ninkaas kahor intuusan dhicin fal-denbiyeedka loo gaystay Anna Lindh.
Ninkan oo sawirkiisa ay soo bandhigeen maanta wargaysyo badan oo ka soo baxa dalka Sweden ayaa lagu qiyaasay inay da’diisu tahay soddomeeyo, isla markaasna u muuqaal ekaa dadka iswiidishka. Waxaa sawirka qaaday kaamerada ama fiidiyowga uu lahaa dukaankii NK ee ay ka adeeganaysay wasiiradda kuna yaalay bartamaha magaallada Stockholm.
Ilaa iyo hadda si rasmi ah booliiska Sweden uguma dhawaaqin inuu ninkani yahay ninkii dilay Anna Lindh, sababtuna waa iyagoo doonaya inay si fiican uga sal gaaraan ninkii dilay Lindh.
Dhinaca kale, aftidii loogu qaadayay lacagta Euro ee la filayay inay dhacdo maanta oo axad ah ayaa sidii horey loogu talagalay u dhacayso, iyadoo tirakoob ay maanta samaysay machadka Galup laguna daabacay wargayska Expressen ayaa sheegay in 43 % shacabka Sweden ay u codeenayaan lacagta Euro, halka kuwa ka soo horjeeda ay yihiin 42%. Tiradan ayaa si weyn isu baddeshay kadib dilkii wasiiradda arrimaha dibadda Anna Lindh oo iyadu dowr weyn ka qaadatay u codeynta lacagta Euro. Intaan la dilin Anna Lindh dadka taageersan qaadashada lacagta Euro waxaa lagu qiyaasayay 35 %, halka kuwa diiddan ay ahaayeen 50 %.
Guud ahaan dadka shisheeyaha ku dhaqan dalka Sweden, gaar ahaan jaaliyadaha muslimiinta ayaa walaac daran ka muujiyay dilka loo geystay Anna Lindh, kadib markii ay jeclaystyeen siyaasadda ay uga barteen Lindh ee la xiriira arrimaha shisheeyaha. “xafiiska Anna Lindh wuxuu u furnaa dhammaan shisheeyaha, gaar ahaan muslimiinta” waxaa sidaas yiri mid ka mid ah muslimiinta ku dhaqan Sweden.
Dukaankii lagudilay Lindh
Anna Lindh oo 46 jir ahayd, waxay jagada wasiirnimo qabatay sannadkii 1998-kii, iyadoo ahayd qof si weyn uga muuqatay xisbigeeda socail-ka ee dalka xukuma. Waxay ku sifaysnayd Lindh isku kalsoonaan la xiriira fikradaha ay qabto, dhiiranaan dheelitiran, aqoon fiican oo ay u lahayd shaqadeeda iyo iyadoo markasta is garab istaagta dadka tabarta daran ee xoogga loo sheegto. Marar badan waxay Anna Lindh taleefishinka Sweden ka sheegtay inuu Ra’iisal wasaaraha Israel yahay nin waalan, waxayna dadweynaha iyadoo tv-ga kala hadlayso u sheegtay inaynan gadanin alaabta ka timaadda Israel sida khudaarta israel ee lagu iibiyo suuqyada Sweden.
Sidaas si la mid ah, waxay dhaleeceen kulul u soo jeedisay dowladda Denmark kadib markii ay si aan wanaagsanayn ula dhaqmeen qaxootiga ku dhaqan dalkeeda. Waxay oggolaatay inay dalkeeda soo qaataan qaxooti reer Afghanistan ahaa oo dalka Australia ay u diidday inay magangelyo siiyaan.
Waxay Anna Lindh isku dayday inay dhexdhexaadiso dalalka labada kuuriyadood, bal si ay u soo af-jarmaan khilaafaadkooda soo jiraynka ahaa. Waxay si weyn uga soo horjeedday dagaalkii lagu qaaday Ciraaq, waxayna taageersanayd in Qaramada Midoobay loo daayo xal-ka-gaaridda arrimaha Ciraaq. Waxaa waxaasoo dhan ka sii darnaa iyadoo si weyn wax uga sheegtay siyaasadda madaxweynaha Mareekanka George W. Bush ku doonayo in siyaasadda Yurub laga hoggaamiyo Washington.
Jaceylka iyo kalsoonida weyn ay kasbatay Anna Lindh ma soo billaaban markay noqotay wasiirka, balse waxay billaabatay markay ardayga ka ahayd Jaamacadda Upsala, iyadoo baranaysay sharciyada. Aad ayeey u jeclaayeen dhammaan ardaydii ay isla dhiganayeen jaamacadda, sidaas si la mid ah waxay kasbatay jaaliyadaha islaamka ee ku dhaqan Sweden. Wixii ka danbeeyay qaraxyadii 11-ka sibteembar, muslimiin badan ayaa dhibaato ka soo gaartay qaar ka mid ah dalal badan oo ka mid ah galbeedka gaar ahaan xarumaha islaamka, waxaana sii siyaaday cadaadiska dhinaca xukuumadahaas ay ku hayeen xarumaha islaamka. Hase ahaatee, muslimiinta Sweden ayaanan wax dhibaato ah la kulmin wixii ka danbeeyay 11-kii sibteembar. Anna Lindh ayaa wasaaraddeeda amar ku siisay inay daabacaan kitaab si hufan islaamka uga hadlaya, waxaana kitaabkaas loo qaybiyay ! dhammaan dugsiyada dalka Sweden si ay shacabka reer Sweden si fiican ugu bartaan wanaagga iyo xadaaradda islaamka uu leeyahay.
Sannadkii 1986-kii ayaa dilkan mid la mid ah loo gaystay Ra’iisal wasaarihii dalka Sweden ee waqtigaas Olf Palm, isagoo markaas la socday afadiisii kana yimid mid ka mid a shineemooyinka ku yaala Stockholm. Dilkaas oo ilaa iyo hadda laga joogo sannado kabadan ayaanan la ogeyn qofkuu ahaa ninkii dilay Olf Palm.
Warkii hore ee Wasiirada tooreyda lagu diley.. Guji..
Faafin: Sept 14, 2003